आर्थ्राइटिस (Arthritis) के हो? | NepalDut
आर्थ्राइटिस (Arthritis) के हो?
डा. रामकृष्ण गिरी पोखरा
Arthritis मांसपेशी-कंकाल प्रणाली (musculo-skeletal system) मा दुखाइ, मानव जातीलाई असर गर्ने सामान्य रोगहरूमध्ये एक हो। मौसम, स्थान, सम्पन्नता आदी जे-जस्तो भए पनि, १३% भन्दा बढी जनसंख्या यो वा अर्को जोर्नीको पीडाले ग्रस्त छन्।
जब जोर्नीमा दुखाइसँगै सूजन उत्पन्न हुन्छ र गतिको सीमितता तथा तापक्रम बढ्ने जस्ता परिवर्तनहरू देखिन्छन्, तब बिरामीहरूलाई “Arthritis” भएको मानिन्छ। Arthritis शब्द कुनै एक रोगको पर्यायवाची होइन, बरु कुनै रोगको एक लक्षणमात्र हो।
Arthritis वा arthralgia (जोर्नीहरूको दुखाई) सयभन्दा बढी फरक अवस्थाहरूमा देखा पर्न सक्छ। जोर्नीहरूको दुखाई मात्रको उपस्थितिले डराउनु पर्दैन। जोर्नीहरूको दुखाईसँग सम्बन्धित डर अनावश्यक छ; बरु त्यो रोग जसले Arthritis उत्पन्न गर्छ, त्यसले नै रोगको मार्ग निर्धारण गर्दछ, Arthritis ले पैदा गर्ने समस्याले होइन।
Arthritis शब्द कुनै एक रोगको पर्यायवाची होइन, बरु कुनै रोगको एक लक्षणमात्र हो।
Arthritis सम्बन्धी धेरै गलत धारणा, भ्रम र आशंकाहरू छन्। Arthritis को कारणले हुने पीडा र कष्टबाट छुटकारा छैन भन्ने धारणाले अधिकांश बिरामीलाई गम्भीर रूपमा व्याकुल बनाएको छ। व्याकुलता र अनावश्यक त्रासले समस्याभन्दा बढी गडबडी निम्त्याउँछ। यसको मूल कारण यो रोगको बारेमा अपूर्ण जानकारी हो, कहिलेकाँही arthritis को बारेमा जागरूकताको अभाव।
Arthritis र योसँग सम्बन्धित रोगले, केही अपवादबाहेक, विरलै बिरामीहरूको मृत्युको कारण हुन्छ। तर यदि उचित उपचार गरिएन भने arthritis ले कालान्तरमा गम्भीर अशक्तता पैदा गर्न सक्दछ। Arthritis को प्रमुख प्रभाव भनेको अपांगता र जीवनको गुणस्तरमा कमी हो।
उचित उपचार गरिएन भने arthritis ले कालान्तरमा गम्भीर अशक्तता पैदा गर्न सक्दछ।
एक गम्भीर संक्रमित बिरामीको विपरित, दीर्घरोगका बिरामीले रोगको बारेमा बढी तथ्यहरू जान्नु पर्छ। यसले बिरामीको आशंका मात्र कम गर्दैन, उसलाई आफ्नै राम्रो देखभाल गर्न पनि मद्दत गर्दछ। अरू दीर्घरोग जस्तै, Arthritis भएमा राम्ररी हेरचाह गरियो भने कम असुविधा उत्पन्न हुन्छ र बिरामीको जीवनको गुणस्तर राम्रो हुन सक्छ।
प्रतिरक्षा तथा वाथरोग विशेषज्ञ गिरी अन्नपूर्ण सिटी क्लिनिक महेन्द्रपुलमा आवद्ध हुनुहुन्छ ।